Iyo yekuzorodzwa kwegore negore kwe iPhone ndiyo imwe yezviitiko zvikuru mu tech: iyo foni iyo vazhinji vanoshuvira kuve neyako, imwe inoisa maitiro uye foni iyo vamwe vese vari kutarisa nani.
Nepo kuvuza uye runyerekupe chisiri chinhu chitsva kune tech nyika, kuwana ruzivo nezvezvitsva zveApple zvishandiso hazvishamisi. Ivo havawanzoregedza zvakazara se Samsung kana Google foni - asi isu tiri kuunganidza zvese zvatiri kunzwa nezveiyo iPhone nyowani pano.
Tine zvakare rakatenderera kutenderera-kumusoro iyo iPhone 5G kutaura nezve apo yakazara iPhone 5G inogona kana kuoneka. Isu tinotenda kuti iyo iPhone 12 ichave ne5G, asi pane mukana inogona kudzikiswa kuti, uti, iyo iPhone 12 Pro uye Pro Max pane kuwanikwa pane zvese zvinoshandiswa.
Apple iPhone 12 kuburitsa zuva
Kazhinji Apple inobata chiitiko che iPhone muvhiki yechipiri yaGunyana uye kazhinji paChipiri. Iyo kambani yakatevedzera maitiro akafanana eiyo 2019 iPhones - kuvazivisa musi wa 10 Gunyana 2019.
Kana iyo kambani ichitevera sutu zvakare muna 2020, isu taizotarisira kuti 8 Nyamavhuvhu 2020 ichave yakanaka kubheja pachiitiko chekutanga kwe iPhone 2020.
Imwe isingazivikanwe iri kutenderera kwekupararira kwecoronavirus uye mhedzisiro yaingave nayo pane itsva tech inotangisa mumashure megore - kusanganisira iyo iPhone 12. Nekuda kwekurambidzwa kwekufamba uye kudzikisira kugona kwekugadzira, hazvinyatso kujeka kuti coronavirus ichabata sei zvinhu parizvino. Isu tinotenda kugadzirwa kweiyo nyowani iPhone nhevedzano yaizotanga kusvika June munguva yeSeptember yaratidza.
IPhone 2020 ichave inonzi chii?
Pre-2017, zvaive nyore kuverengera kuti inotevera iPhone yaizodaidzwa nani. Kutevera iyo iPhone 3G kusvika kune iyo iPhone 8, Apple yakashandisa zvinoteedzana nhamba uye ndizvo izvo.
With the iPhone 11, 11 Pro uye 11 Pro Max yatotanga muna 2019, zvakanaka vangangodaro iyo 2020 iPhones ichanzi iPhone 12, iPhone 12 Pro uye iPhone 12 Pro Max. Kunyangwe kuchave nekuparadzaniswa kwekupa mazita emhando dze5G, zvakaoma kuudza, asi isu hatifungiri. Panogona kunge paine imwe mhando yakawedzerwa, inotungamira kune iPhone 12 Max zvakare.
Izvi zviri pamusoro pemarunyerengi efaidiki uye isingadhuri iPhone, iyo iPhone SE 2 kana iPhone 9 sevamwe vari kuidana.
Apple iPhone 12 dhizaini
Mhando dzeApple iPhone 12 dzinonzi dziri kuuya neyakagadzirwa nyowani, zvichienderana nerunyerekupe. Izvo hazvisati zvanyatsojeka kuti iyo dhizaini inogona kunge iri yei - kunyangwe zvimwe zvinoshandurwa zvinotaridza mativi akaenzana tichienzanisa nematanho akatenderwa atakashandiswa kubvira ipapo iyo iPhone 6. Supply chain source yakurudzira kuti mafoni ave akakurisa zvishoma, nekuda kwezvakakura kuratidza, asi zvakatetepa pazere nemhando dze 2019.
Isu tiri kutarisira kuona notch yakaderedzwa yemhando dze2020 - kana kwete notch zvachose - uye isu tinovimba iyo yechando matte girazi rekumashure kubva kune 11 Pro mienzaniso inodzoka sezvakanaka munyama. Pave paine patent yakamisirwa fon notch-shoma, asi koFicha ID yaizogariswa inoramba iri pikicha.
Runyerekupe arikureva kuti kuchava nemhando ina dze iPhone - maizi maviri ePro uye maviri maseru eiyo yakajairika modhi - zvichireva huwandu hwenzvimbo dzakasiyana dzemitengo, uye zvingangoita isingadhuri yekupinda.
Apple iPhone 12 inoratidza
120Hz zororo zororo
Mhemberero dzinoratidza kuti ese ma2020 iPhones ave neOLED kuratidzwa. Parizvino, iyo iPhone 11 ine LCD yekuratidzira, nepo Pro mhando dzive neOLED. Kune zvakare mishumo yeiyo inosiyana yekuzorodza mwero uye shanduko muhukuru, iine 120Hz yekuvandudza chiyero chakataurwa.
Sezviri pachena isu tinogona kuwana 5.42-inch modhi, 6.06-inch modhi uye 6.67-inch munzvimbo ye5.8-inch, 6.1-inch uye 6.5-inch modhi atinawo panguva ino. Kumwe kufungidzira kunoratidzawo mu-kuratidza zvigunwe zvekunzwa zvigunwe.
3D Kudzika makamera
Night Mode kuvandudzika anogona
Pave paine kufungidzira kwekamera Quad pane iyo iPhone 12 Pro Max, ne sensor TOF. Nekudaro, chibvumirano chakazara ndechekuti kuve nekatatu kamera zvakare asi hongu, neToF sensor. Zvimwewo nemamiriro ekunze, izvi zvichabatsirawo neAARKit apps.
Isu tinotarisirawo kuona kumwe kuvandudzwa kweNight Mode uye zvakafanotaurwa izvozvo
Apple iPhone 12 hardware uye software
Mishumo mizhinji inoratidza Apple inotora batano ye 5G yekubatanidza iyo iPhone 12. Mishumo iri kupa pfungwa yekuti mamodheru ese ane sarudzo ye5G uye Mutungamiriri weQualcomm Cristiano Amon akataura kuti kupinza 5G muye iPhone kwave kutanga. Qualcomm ichangobva kuzivisa iyo X60 modem uye antenna nyowani - zvimwe pane izvo pazasi.
Isu tinotarisira kuona iyo A14 chip pasi pehodhi yeiyo iPhone 12 mhando, iine zvese zvinopihwa zvakafanana zvigadzirwa uye isu tinotarisira kuzovaona vese vachiswederera paSOS 14, iyo yatichazonzwa zvimwe pamusoro payo pachiitiko cheAppleveloper munaJune.
Isu tinotarisirawo kuti ese matatu matatu emhando ataure iyo U1 chip - iyo ichaunza pamwe nekuvandudzwa pfupi-nzvimbo nzvimbo uye kugovana.
Apple iPhone 12 runyerekupe: Izvo zvaitika ikozvino
Hezvino zvese zvatanzwa nezveiyo iPhone 12 modhi kusvika zvino.
9 Kurume 2020: Iyo iPhone 12 Pro kamera inonzi ine 64-megapixel sensor
Iine itsva Samsung Galaxy S20 Ultra inozvirumbidza iyo ine 108-megapixel sensor, iyo iPhone 11 Pro kamera 12-megapixel kamera ikozvino yave kutarisa zvishoma paltry. Iyo 64-megapixel sensor ichashandiswa mune iyo iPhone 12 Pro uye Pro Max zvinoita, apo pachave nekuvandudzwa kwemamwe mairi lenses (ehe, kamera katatu zvakare). Zvisinei, a Nguva-ye-Ndege (ToF) sensor ichawedzerwawo.
18 Kukadzi 2020: Iyi ndiyo iPhone 12 Pro 5G modem?
Apple mudiwa Qualcomm yakaratidza kuti its yazvino X60 5G modem. Nepo ichazotongerwa masheji emafoni ehurombo muna 2021, anogona kupedzisira ave mukati meiyo iPhone 12 Pro.
Mushure memakore ezvematambudziko emutemo, Qualcomm uye Apple vakarova chibvumirano pakutanga kwegore rapfuura saka isu tinoziva kuti humwe tech mukati mekutanga 5G iPhone ichave iri Qualcomm-based.
Apple iPhone 5G: Iri kuuya riini uye chii chatinoziva kusvika parizvino?
21 Ndira 2020: Iyo yakajairika iPhone 12 ichaita mutete uye yakakura kupfuura iyo iPhone 11
Supply cheni zvinyorwa vari kupa pfungwa kuti iyo 2020 iPhone dhizaini haizoshanduke zvakanyanya, asi mafoni achange achiderera kupfuura iwo ma2019 mhando, asi pamwe zvishoma zvakakura, aine akakura kuratidza.
31 Zvita 2019: Inotaridzika kunge iyo iPhone 12 haingaiti notch
Patents mafaera aApple anayo akaoneka yefoni isina-isina, asi inosimudza mubvunzo wekuti Apple ichagovera sei ID ID kana pasina nzvimbo yemidziyo inodiwa.
5 Nyamavhuvhu 2019: Chirevo chinoratidza mana iPhone 12 modhiyo
A Chirevo kubva kumuongorori Ming-Chi Kuo vanoti kuchave nemhando ina dzePaifone gumi nembiri (pamwe neApple SE 12) muna 2. Kubva pamushumo mumwechete unouya ruzivo rwekuti muna 2020, Apple ichaisa zvese zvinobatika pafoni.
5 Zvita 2019: Qualcomm CEO inoti 5G iPhone yekutanga
CEO weQualcomm, Cristiano Amon, akataura kuti chimwe chezvinhu zvinonyanya kukoshesa Qualcomm muhukama hwayo neApple kuchave kuwana 5G iPhone yakatangwa nekukurumidza sezvazvinogona.
30 Gumiguru 2019: Apple 5G iPhone 12 zvirongwa zvakakwenenzverwa, ane matatu mhando akapiwa 2020
Nikkei Asia Ongororo yakadaidzira Apple iri muhurukuro nevashandisi vekusimudzira kuti igadzire matatu ePhones ane 5G data yekubatanidza muna 2020.
Kana chiri chokwadi, zvaizoreva iyo iPhone 12, iPhone 12 Pro uye iPhone 12 Pro Max dzinofanirwa dzose kuve 5G inogoneswa.
28 Gumiguru 2019: iPhone 12 yakati iuye ne 120Hz OLED kuratidzwa
Maererano nezvinowanikwa muChina, Apple ichashandisa 120Hz screen technology pane yayo 2020 iPhone 12 modhi, ndiyo yakafanana zororo rekuno shandisa parizvino pane Pro Pro mienzaniso.
Nepo 90Hz skrini iri kuwedzera kuve yakakurumbira kumafoni ane OnePlus uye Google zvose achivatora - 120Hz zororo zveshuwa hazvinyanyi kuwoneka, kungova neRazor 2 neAsus ROG II zvishandiso zvine yakakwirira zororo zororo ikozvino.
30 Gunyana 2019: Yakanyanya Apple Apple 12 inodururwa inoratidza kwete notch yeiyo Pro mienzaniso
Ben Geskin akagadzira mamwezve madudziro kuratidza icho iPhone 12 Pro uye 12 Pro Max yaigona kutaridzika sokunge nyowani inonyangarika uye Chiso ID chakabatanidzwa mu bezel pamusoro pechiratidziro, pamwe nemativi emativi, senge iPhone 4.
26 Nyamavhuvhu 2019: iPhone 2020 prototype inoratidza FaceID yakabatanidzwa mu bezel yepamusoro isina notch
Ben Geskin - uyo akaburitsa akawanda maiyo maPhones munguva yakapfuura - akafona achiti "imwe ye2020 prototypes ine 6.7-inch inoratidzwa neFace ID uye TrueDepth kamera system inowanikwa mu bezel yepamusoro." Inotaridzika zvakanaka kana ichokwadi, hee?
Exclusive: Imwe yeiyo 2020 iPhone prototypes ine 6.7-inch inoratidzwa neFace ID uye TrueDepth kamera system inowanikwa mu bezel yepamusoro. pic.twitter.com/sAJE7J12ty
- Ben Geskin (@BenGeskin) September 26, 2019
26 Nyamavhuvhu 2019: Apple iPhone 12 ichadzokera kuPa 4 XNUMX dhizaini, anodaro muongorori
Apple muongorori Ming-Chi Kuo akaburitsa mushumo vachiti iyo iPhone 12 ichave iine simbi yesimbi chimiro, senge iPhone 4 yakaunzwa anenge makore gumi apfuura. Iye akati: "Iyo simbi simbi uye kumberi uye kumashure 2 / 2.5D girazi zvichiri kushandiswa, asi simbi yemukati simbi inozoshandurwa ikaita senge yakafanana neye iPhone 4, kutsiva iko kurongedzwa ikozvino."
Fungidziro dzinoenderana neBen Geskin, iyo yakadzoserwa zvichitevera mushumo.
Saka pamwe yangu 2020 iPhone pfungwa ndizvozvo pic.twitter.com/GrBcEDCG4u
- Ben Geskin (@BenGeskin) September 25, 2019
7 Nyamavhuvhu 2019: Iyo 2020 iPhone ichaziviswa kuti ichaunza dhizaini nyowani
Muongorori Ming-Chi Kuo akati iyo yegore rinotevera foni ichave neyese-nyowani dhizaini.
Kuo akati iyo 2020 iPhone lineup ichaisa shanduko huru nhatu: Iyo-nyowani fomu chinhu chinhu dhizaini; kutsigirwa kwekutsigirwa kwe5G; uye kamera inosimudzira.
5 Nyamavhuvhu 2019: Apple ingangoshandisa mu-screen sensor muna 2020 iPhone
Bloomberg yakataura Apple ingashandisa an mu-kuratidza zvigunwe zvekunzwa zvigunwe mune iyo 2020 iPhone - chimwe chinhu chakaongorora Ming-Chi Kuo chakambofungidzirwa.
Maererano nesaiti, Apple inogadzira tekinoroji yekuratidza zvigunwe zvehunyanzvi inoshanda senge zvigadziriso zvatakaona zvichitangwa ne Samsung, OnePlus, Huawei, nevamwe. Pamwe, chinogona kunge chiri Chikwangwani ID-chakadzvanywa chinoshanda pamwe neChiso ID, chichibvumira vashandisi kunyatsoburitsa wachi yavo yekukiya dhizaini uye maitiro ekubhadhara.
22 Nyamavhuvhu 2019: Apple iPhone 11 'Pro', Tarisa Series 5 uye AirPods 3 zvinhu zvakaratidzwa mumushumo mutsva
Chirevo kubva kuBloomberg yakapa huwandu hwehuwandu pane iyo 2019 iPhones, asi zvakare yakati iyo 2020 iPhones ichapa 5G yekubatana uye kamera inowedzera kumashure kweAr.
Maererano nomushumo: "Hapana weaya manyowani anosanganisira 5G, asi gore rinouya kuda. Vachavazve nemakamera anotarisana ne 3D kamera inowedzera kugona chaiko. "
21 Nyamavhuvhu 2019: Apple yekuyedza OLED inoratidza kubva kune vamwe vatengesi ve iPhone 2020
Sekureva kwaNikkei Asia Ongororo, yakaratidzwa neApple Insider, Apple inonzi inonzi iri kuyedza OLED kuratidza kubva kune vatengesi kunze kweiyo Samsung yeiyo 2020 iPhone.
Zvinonzi mutengesi achangoburwa anoedzwa ndeyeBHAKI Technology uye Apple inonzi isarudze mukupera kwa2019 kana mapanuru asangana nematanho ake.
5 Nyamavhuvhu 2019: Hupenyu hwekupedzisira Bata ID! Apple ye2021 iPhone ingangoshandisa mu-kuratidza zvigunwe zveminwe tech
Muongorori Ming-Chi Kuo ataura kuti Apple ingangopa Ultrasonic yepasi-kuratidza zvigunwe zvigunwe mu iPhone 2021. Kuo akati system ino ichashanda padivi peApp's ID ID.
Akadzokorodza zvakare kuti notch yacho yaizenge ichiwedzera diki yeiyo 2020 iPhone isati yakandwa zvakakwana yeiyo 2021 iPhone.
22 Chikunguru 2019: Egore rinotevera iPhones inogona kuwana kuratidzwa uko kaviri nekukurumidza
Sekureva kwe leaker Ice Universe, iyo 2020 iPhones inogona kupa mutengo wekuzorodza, uchivabvumira kuchinja pakati peye 120hz modhisheni kubva pa60hz yekunyatsoita chiitiko.
Isu tinofungidzira kuti iPhone inganamatira ku60hz nekuda kwezvakawanda, kuchibvumira kuchengetedza pakushandisa magetsi, asi chinja mu 120hz modhiyo yevhidhiyo kana pamwe Apple Ipenzisi basa kana Apple ikawedzera kuwirirana gore rinouya.
19 Nyamavhuvhu 2019: Vatengesi ve iPhone XII Max vanoratidzika pa Twitter vane fungidziro dzekufungidzira
Ben Geskin akaburitsa zvimwe zvinorehwa zveizvo iye anotenda kuti iPhone XII Max ichaita senge muna 2020. Akapawo mamwe mamiriro pane zvakatemwa zvaanotarisira kuoneka, zvese zvine musoro.
2020 iPhone XII Max Pfungwa
- Nyowani yakaganhurirwa-kure dhizaini
- 6.7 ”OLED ine diki notch
- Quad Kamera ine ToF kamera
- 5G pic.twitter.com/iQQyyYYmm4
- Ben Geskin (@BenGeskin) July 19, 2019
11 Chikunguru 2019: Iyo iPhone ichave nemakamera ayo epamberi pasi pekuratidzwa na2021
Muongorori Ming-Chi Kuo anoti iyo iPhone's notch hombe ichanyangarika zvachose na 2021. Kuo anoti iyo iPhone's notch ichawedzera zvishoma muna 2020 isati yaitika 2021.
Kuo haatsanangure kuti Apple ingabudirira sei mune izvi, asi imwe nzira ichave yekufambisa Yechokwadi Kudzika kamera kamera system - iyo inoshandiswa paFace ID - kuseri kwechiratidziro. Kune matambudziko makuru neiyi tekinoroji panguva iyoyo kunyange hazvo paine imwe mhinduro?
9 Chikunguru 2019: Apple inogona kusunungura maPhones mana muna 2020 kusanganisira yepakati-renji modhi
Muongorori Samik Chatterjee paJP Morgan Chase akati Apple inogona kuvhura maPhones matsva muna 2020, kusanganisira anotevera anoteera iPhone XS uye XS Max, anotevera anotevera ku iPhone XR uye yepakati-renzvimbo iPhone.
Chatterjee anoti iyo yepakati-nzvimbo iPhone inogona kuva neiyo yakaenzana screen saizi iPhone 8 asi haizovi neOLED kuratidzwa kana 5G kugona, senge mamwe maPhones matatu anotarisirwa kupa.
18 June 2019: Apple iPhone XS Max inogona kuwedzera kunyange yakakura muna 2020, muongorori anoratidza
Apple muongorori Ming-Chi Kuo akati Apple ichazivisa 5.4-inch uye 6.7-inch yakakura-magumo iPhones ine OLED inoratidza inopa 5G yekubatana, pamwe neiyo 6.1-inch OLED modhi inotsigira inosvika kuLTE.
Kuo akatiwo Apple ichapa rutsigiro rwe5G kune ese maPhones matsva kubva muna 2021 uye zvinofungidzirwa kuti kambani iyi ichave neayo 5G chip panosvika 2023.
3 Kubvumbi 2019: Vatatu OLED mhando uye hukuru hwakasiyana rumored for iPhone 2020
Digitimes yakataurwa kuti matatu matatu ma2020 iPhones ave neOLED kuratidzwa uye hukuru hwechiso huchachinja uchienzaniswa neiyo iPhone XS, iPhone XS Max uye iyo iPhone XR.
Saiti yacho yakati kuchave nemhando 5.42-inch, mhando 6.06-inch modhi uye 6.67-inch muenzaniso weiyo rinotevera iPhones.
30 Ndira 2019: Apple yekuwedzera katatu makamera ku 2019 iPhone, 3D kamera kune 2020 iPhone
Bloomberg akati iyo itsva TrueDepth kamera system inowedzerwa kune iyo 2020 iPhone uye iyo ichaisa Nguva yeFlight 3D sensors nema lasers ayo anokanda zvinhu mukamuri kugadzira iyo 3D mufananidzo wekwaunogara.
Mhedzisiro yacho inofanira kuve yakadzama ruzivo rweAK, ruzivo rwakadzama rwekuona nekuiswa kwezvinhu zvinowoneka. Aya makamera e3D anoongorora nzvimbo kusvika pamamita gumi nemashanu kubva pamushini, zvinonzi.
4 Zvita 2018: Hapana 5G iPhone ye 2019, iwe uchafanirwa kumirira kusvika 2020 yekugamuchirwa kweApple
Bloomberg akati kuti "vanhu vanoziva nezvenyaya iyi" vakati Apple ichamirira kusvika iyo network ye5G ichisimba uye isimbe isati yaburitsa chigadzirwa chinowirirana.
Iko saka kufungidzirwa kuti Apple haizoburitse iPhone 5G muna 2019, asi ichaita muna 2020.
23 Kurume 2018: Apple ingadzikisa dhizaini razvino refoni kuti rirongeke iPhone muna 2020
CNBC yakashuma Muongorori uyu anonzi Wamsi Mohan ku Bank of America Merrill Lynch akati Apple iri kushanda nevagari veAsia parunhare rwunotenderedzwa uye iyo 2020 iPhone ichave yakasiyana.